नेपाल आज | साताको दोस्रो दिन पनि नेप्से उकालो!
साताको दोस्रो दिन पनि नेप्से उकालो!
सोमबार, ०७ पुष २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडौं - साताको दोस्रो दिन नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा वृद्धि भएको छ । आइतबार सामान्य अंकले उकालो लागेको नेप्से सोमबार १७.७७ अंकले बढेर ११६८.५८ अंकमा पुगेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा १.५४ प्रतिशतको वृद्धि हो ।
आज कूल ५९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । आज कूल १७७ कम्पनीको १७ लाख ५४ हजार ३६३ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ । जसमध्ये शिवम् सिमेन्टको सबैभन्दा बढी ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
साेमबार कूल ६ कम्पनीका लगानीकर्ताले ९ प्रतिशतभन्दा बढी कमाएका छन् । सबैभन्दा बढी नागरिक लगानी कोषका लगानीकर्ताले १० प्रतिशत कमाएका छन् ।
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको ९.९२, सर्पोट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको ९.८६, शिवम् सिमेन्टको ९.८६, गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ९.८४ र सिर्जना फाइनान्स वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य ९.७१ प्रतिशतले बढेको छ ।
कारोबारमा आएका १२ कम्पनी मध्ये म्युचअल फण्ड बाहेक बाँकी समूह उकालो लागेका छन् । जीवन बीमा १७०, निर्जीवन बीमा १५८ र उत्पादनमूलक समूह ११३ अंकले बढेका छन् ।सोमबार पाँचथर पावर कम्पनीको शेयर मूल्य ७.०२ प्रतिशतले घटेको छ । बजारमा कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता १०६ रुपैयाँ रहेको छ ।